Ukuphupha ngecarnival Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
EJamani, rhoqo ngonyaka nge-11 kaNovemba ukusuka kwi-11: 11 kusasa, ixesha le-carnival liyaqala, ngakumbi kwindawo yaseRuhr naseRhineland. Ngentwasahlobo, ukusuka eWeiberfastnacht ngo-11: 11 ekuseni. M., Izinto ezimnandi zibuyele ezitalatweni zeMardi Gras okanye iCarnival. Bazifihle ngesinxibo esimibalabala, abantu bonwabile besizulazula esixekweni, bephosa i-confetti, bebukele imikhosi yomnyhadala, beqokelela ilekese, besela kwaye bebhiyozela. KubuKrestu, iMardi Gras iphawula ixesha kungekudala ngaphambi kokuqala kwexesha lokuzila ukutya leeveki ezintandathu, eliqala ngoLwesithathu weAsh.
Kodwa ayisiyiJamani kuphela apho i-carnival ibhiyozelwa minyaka le. I-Carnival ikwathandwa kakhulu kwihlabathi liphela. Umzekelo, imingcelele yaseRio de Janeiro kunye nabadanisi bayo abanxibe kakhulu i-samba okanye iVenice Carnival nazo zonke iimaski zayo zentelekelelo ziyaziwa. Nangona kunjalo, ayisiyiyo yonke imithendeleko kumazwe ahlukeneyo eyenzeka ngexesha elinye.
Nokuba kuseJamani, eSpain, e-Itali okanye eCanada, imibhiyozo yecarnival ngokufanayo ikhuthaza abantu ukuba banxibe. Ngosuku olunye okanye nangaphezulu, abantu banxiba isinxibo kwaye ngenxa yoko phantse kwisikhumba esahlukileyo. Ngokukodwa ezi holide kubomi bemihla ngemihla zenza iCarnival ithandwe kangaka. Kananjalo emaphupheni uhlala ufumana iimpahla ezinje ngecarnival, uyenze ibe luphawu oluqhelekileyo lokuphupha.
1 Uphawu lwephupha «Carnival» - Ukutolikwa ngokubanzi.
2 Uphawu lwephupha «Carnival» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «Carnival» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «Carnival» - Ukutolikwa ngokubanzi.
I-Carnival ihlala iluphawu lombhiyozo ovuyisayo, apho ezinye izithintelo ezinokuthi zithintele indlela ubani aziphethe ngayo kubomi bemihla ngemihla zishiyiwe. Ukuze iphupha lakho leMardi Gras lithethe ngokwakho Ukubeka Ndifuna.
Ngamanye amaxesha umfanekiso wephupha unokubonisa ukuba likhoboka leziyolo ngendlela engathandekiyo. Kwakhona, ukuba umntu uphupha ngeCarnival, iphupha elo lingalumkisa ngokuchasene nokungakhathali okugqithisileyo, okunokubangelwa kukungaziwa kwimeko efihlakeleyo.
Isimboli yephupha linokuthetha ukuba umphuphi uyathanda ukudibana nabantu abatsha kwaye Abahlobo Ndifuna ukuvala, njengoko kuhlala kusenzeka kwizitrato zaseMardi Gras.
Ngapha koko, iphupha leCarnival linokuba ngu Iihambo bhengeza ukuba ukuphupha kuya kuba namava. Ukuba umntu unxibe isinxibo esingaqhelekanga ephupheni, iya kuba yinto entle kwaye enomdla. Nokuba kuphela abanye abantu ephupheni babenxibe isinxibo kwaye iphupha alizange lenze njalo, ubusuku obumnandi busenokukulinda.
Ukuba umntu ubona amantombazana agadileyo enxibe iipitikoti ezimfutshane phantsi kokufihla ephupheni, akufuneki ibe nekratshi kakhulu el mundo zokwenza iwotshi.
Uphawu lwephupha «Carnival» - ukutolikwa kwengqondo
I-Carnival njengephupha ingqina kutoliko lwengqondo ngephupha lomnqweno wokufuna okungakumbi ezahlukeneyo. Mhlawumbi isiqhelo siye sangena kancinci kubomi bomphuphi kwaye umntu ekubhekiswa kuye akanakufumana nantoni na entsha. Ubomi obunqabileyo obunjalo bahlala bunganelisi kwaye ngamanye amaxesha benza isidingo sokwahlukana nesiqhelo.
Ngamanye amaxesha umfanekiso onjengephupha weCarnival ukwangumqondiso wokuba umntu angathanda okomzuzwana I-erotic adventure Ndiya kuva ngaphandle kokuziva ndizisola ngayo. Kusenokwenzeka ukuba uphupha ulangazelela isini esingakhathaliyo, ungaphantsi kwemihlangano yoluntu kunye neendlela zokuziphatha.
Nabani na ophupha i-Carnival kwaye enxibe i-clown okanye i-costume yokunxiba ekugqibeleni uya kukhululeka kuzo zonke iindibano kunye nento eqhelekileyo. Unika, ukuba kuphela iintsuku ezimbalwa, kubuntu bokwenene Indawo yokuphuhlisa kwaye akunangxaki ukuba "uhlekise" phambi kwabanye. Ukuba wenza intetho eBütt eMardi Gras, oku kungabonisa ukuba ulangazelela ubomi obahlukeneyo bemihla ngemihla.
Uphawu lwephupha «Carnival» - ukutolika kokomoya
Ukuzonwabisa ngokomoya Ihlala ihlala ephupheni lomkhosi. Umphuphi uvulelekile kwimiboniso emitsha kunye namava okomoya.